Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Bilaogin’ny Tsikera · Global Voices teny Malagasy » Print
Pakistana: Bilaogin'ny Tsikera
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:02 GMT 1	 · Mpanoratra Omer Alvie Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Teknolojia
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2007)
Tahaka ny ‘Phoenix’ velona indray, miverina aho, nohavaozina, velombelona ary nihatanora ho bilaogera vaovao sy mavitrika. Raha ny marina, manita-dresaka kely aho, ny savorovoro mivoaka avy amin'ny krizy no mitovitovy amiko kokoa, miverina aho, mahantra, torovana sy ketraka manampy ilay bilaogera efa kamolahy ato anatiko. Tsy te handiso fanantenana ny tafika mpanaraka ahy manerana ny tany aho (mety hisy izany!), ka manoratra ity lahatsoratra mahira-tsaina ity, tsy hanazavana ireo harenan'ny tontolon'ny bilaogy Pakistaney fotsiny ihany, fa hanonerako ireo marobe nomen'ny mpankafy ahy (ompan'olon-tsy fantatra anarana, fandrahonana sarontsaronana sy mailaka fankahalàna an-tsoratra) tanatin'ny taona maro.
Anatin'ity lahatsoratra ity, hamboraka aminareo ny paikady mahomby sy ny fitondrantenako rehefa maneho hevitra anaty bilaogy aho. Kanefa alohan'ny hahatongavako amin'izay, manome ny antsipirian'ilay raharaha fanivanana mibaribary  nisy tao Pakistana farany teo i Glass House.
Toa mafy loatra ho an'ny Birao ny fahitàna Punjabis aman'arivony nidera ny fahatongavan'ny Filohan'ny Fitsaràna – Amin'izao, samy nanjavona tampoka tamin'ny fahitalavitsika ny fantson'ny ARY sy ireo telo an'ny Geo.
Rehefa mamaky lahatsoratra iray miavaka, manome fahafinaretana sy voarafitra tsara, tsy maintsy manototra dera ho an'ny mpanoratra ny olona mba hanosehana ilay bilaogera hamokatra lahatsoratra lavorary hatrany. Ho an'ireo bilaogera vehivavy (20 ka hatramin'ny 40 taona), izao no fanehoankevitra tiako soratana, “Tiako ianao ary heveriko fa tokony hanorina tokantrano isika, izao dia izao!” Ho an'ireo bilaogera hafa kosa, izao no alefako, “Ô, eo moa e, mbola mahavita tsara nóho izao ianao!”
Mametraka ny hadisoana ho an'ny MQM  i Teeth Maestro momba ilay fanivànana fahitalavitra.
Ho an'ireo lahatsoratra heverina fa ‘antonony’, raisina ho fahalalam-pomba tsara eo amin'ny fanoratana bilaogy ny fanehoana ny hevitra momba ny votoatin'ilay lahatsoratra ary manome fanamarihana entina manatsara zavatra ho an'ilay bilaogera mba hanatsaràny ny fahaizany manoratra. Misafidy ny hanao tsikera mifono hevitra ankolaka aho rehefa maneho ny hevitro amin'ny lahatsoratra toy ireny; “Manandrama manoratra bilaogy an-tsary amin'ny manaraka, ry Shakespeare a!”
Manoratra ny asa sorany farany momba ny toejavatra misy ao Afovoany Atsinanana  (pejy voafafa) amin'ny fomba matihanina i Fountainhead.
Raha tsy voasarika miverina, an-dàlam-pidirana amin'ny ady matroka eran-tany izao tontolo izao. Any Afovoany Atsinanana no tany fiadiana. Ary ireo Silamo sy ireo hery Tandrefana avondron'ireo Jiozy Zionista no mpifanandrina roa lehibe amin'izany.
Mijoboka anatin'ny lasan'i Pakistana i Raza Rumi mba hanazavany ireo fotoana naha-Kafkaistana an'i Pakistana. 
Indraindray, mahita lahatsoratra iray tena latsaka ambany nóho ireo rehetra ireo ianao ka miafara amin'ny aretin-doha sy loiloy izany na dia vakianao mandritra ny fotoana fohy monja aza. Ho an'ireny lahatsoratra ireny, mbola fitondrantena mety kokoa ny manondro ny tsy fahampiam-pahaizan'ilay bilaogera aminà fomba mendrika sy mahalala fomba. Ity no tiako, “Mbola ambany nóho ny taha-pahaizanà “Opossum” ny anao. Angamba tokony hieritreritra ny hamela ny fanoratana bilaogy ka haka toerana ao amin'ny Fox News.”
Farany, te hanazava ny lahatsoratro vao haingana momba ny seho an-tsehatra Pakistaney iray voararan’ ny governemanta aho. Aorian'ny amakianao ity lahatsoratra ity, ny hany fanehoankevitra mendrika tokony havoakanao dia, “Oao! Tena mahira-tsaina sy mahaliana tokoa ilay lahatsoratra hany ka te handefa vola be ho anao any amin'ny kaonty bankinao manokana aho.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/130564/
 fanivanana mibaribary: http://politicalpakistan.blogspot.com/2007/05/censored-censored-censored-and-censored.html
 toejavatra misy ao Afovoany Atsinanana: http://truthspring.info/2007/04/06/the-orbats/
 hanazavany ireo fotoana naha-Kafkaistana an'i Pakistana.: http://pakistaniat.com/2007/05/06/pakistan-kafka-absurd-liaquat-jinnah-quaid-fatima-madar-millat-sharifuddin-pirzada-suharwardy/
 ny lahatsoratro vao haingana : http://www.theoliveream.com/2007/04/29/drama-queens/